Precision Zvikamu Kugadzirisa - K-Tek Machining Co, Ltd.
K-Tek Machining inopa OEM / ODM masevhisi, isu tinokwanisa kupa kugona kune akasiyana emabhizimusi vatungamiriri mumusika. Ekugaya edu mabasa anosanganisira akawanda CNC azvikuya machine, uye zvigadzirwa zvedu zvinowanzoshandiswa muchini, zvemagetsi, kushandisa michina, motokari, zvokurapa, simba idzva uye dzimwe nzvimbo.
Ndeipi nzira yekombuta yekuverenga kudzora?
CNC yekugaya inoshandisa rotary yekucheka chishandiso chakafanana nekuboora, kunze kwekuti chishandiso chimwe chinofamba pamwe chete nematemo akasiyana kuti aumbe akasiyana maumbirwo, kusanganisira maburi uye nzvimbo dzakatsetseka. Iyo yakajairwa fomu yeCCC machine nekuti inoita mashandiro ekuchera uye lathing. Iyi ndiyo nzira iri nyore yekuboora maburi emhando dzese dzezvinhu zveprimiyamu kuburitsa chigadzirwa chakakodzera chebhizinesi rako.
Precision azvikuya uye vakarongeka CNC nehurongwa
Nedu chokurukisa inotonhorera zvitengeswa, tinogona kutema zvinhu nekukurumidza kupfuura mureza inotonhorera akapfapfaidza masisitimu, uye yedu CAD / CAM, UG uye Pro / e, 3D Max. inogona kunyatso shanda pamwe nevatengi nehunyanzvi uye inowedzera zvakanyanya maitiro ese uye nekukupa zvigadzirwa zvine hunyanzvi. Yedu miviri yakatwasuka CNC yekugaya nzvimbo inoratidzira otomatiki matinji ekutenderera ayo anotibvumidza isu kumuchina chero kona. Pamwe chete nekushandisa zvishandiso zvakaurungana, izvi zvinotibvumidza kuti tiwane yakafanana geometry yakaoma senge chero mashanu-akabatana muchina.
5-akabatana CNC azvikuya chinzvimbo
Kana zvataurwa muchina wepakati-5-akabatana muchina, inoreva kuwanda kwenzira dzinogona kufamba nesimbi yekucheka, kuti mushure mekumisikidza chishandiso chekucheka chinofamba pamusoro peiyo X, Y uye Z mativi akateedzana uye anotenderera paA uye B mademo, panguva imwe chete. azvikuya uye machine, uye yepamusoro pemvura machine psac kumugumo. Izvi zvinobvumira zvikamu zvakaoma uye zvakaoma kana zvikamu zvine mativi mazhinji zvinogona kugadziriswa kusvika kumativi mashanu echikamu mukumisikidza kumwe. Izvi zvinotsigira mainjiniya ekugadzira zvigadzirwa zvine zvikamu zvakawanda zvinogona kusimudzira mashandiro uye mashandiro echigadzirwa chekupedzisira pasina maitiro akaganhurwa.
Zvakanakira 5-Sekaiichi hwokugaya hwakabvira
Yepamusoro-soro yekumusoro kwekupedzisira: Zvinogoneka kugadzira epamusoro-soro michina yekupedza zvikamu nekushandisa kweapfupi macheki ane akacheka akachimbidzika kumhanya, ayo anogona kudzikamisa kudengenyeka kunowanzoitika kana uchinge uchinge uchinge wakadzika maburi ane 3-axis maitiro. Inoita kumeso pamusoro kupera mushure mekugadzira.
Positioning kunyatsoita: 5-axis panguva imwe chete yekugaya uye machining zvave zvakakosha kana zvigadzirwa zvako zvapedza zvikafanira kuteedzera kune yakasimba mhando uye yekuita maratidziro. 5-axis CNC machine inobvisawo kudiwa kwekufambisa chidimbu chebasa pakati penzvimbo dzakawanda dzekushandira, nokudaro ichideredza njodzi yekukanganisa.
Ipfupi kutungamira nguva: Iyo inovandudzwa kugona kweiyo 5-axis muchina mhedzisiro mukudzikira kwekugadzira nguva, iyo inoshandura kuita ipfupi kutungamira nguva yekugadzira kana ichienzaniswa ne3-axis muchina.
Simbi: Aluminium, Stainless simbi, Mhangura, Simbi, Brass, Titanium, Sterling sirivheri, Bronze, nezvimwe.
Mapurasitiki akaomarara uye zvimwe zvinhu: Nylon, Acetal, Polycarbonate, Polystyrene, Acrylic, Fiberglass, Carbon fiber, Teflon, ABS, PEEK, PVC, nezvimwe.